Ese ma indices eSpanish stock market | Ehupfumi Zvemari
Kana iwe uchizoisa mari yako mumusika weSpanish wemusika, iwe unofanirwa kuziva kuti hazvisi zvese zvinoderedzwa kune yakasarudzika indekisi yemari yenyika. Ibex 35. Kana zvisiri, pane kudaro, kune mamwe mabhenji anogona kubatsira zvakanyanya kuti ugone kuita kwako mashandisirwo mumisika yemari. Kusvika padanho rekuti kune vakawanda vadiki nepakati varimimari vanogona kunge vasingazivikanwe. Kana zvirinani uine ruzivo rwushoma nezve maamakanika ayo uye kunyangwe nemitengo inoumba aya echipiri stock index Iko kuwana kukuru kwemari kunogona kuwanikwawo kana mamiriro emusika ari akanyanya kunaka.
Mukati meiyi misika yezvemari muSpanish sphere, kune iwo emarudzi ese uye ane akasiyana zvikamu. Kubva pane izvo zvakakosha zvinosanganisirwa Latin makambani izvo zvinozivikanwa nekusanganisira zvidiki uye zvepakati-chivharo masheya. Chero zvazvingaitika, une zvakawanda zvaunogona kusarudza kubva, zvichienderana neprofile yaunopa semudhara mudiki nepakati nepakati. Kunyangwe zvichange zvichinyanya kukosha kuti iwe uzive izvo zvinoumbwa uye ndeapi ayo anonyanya kutaurwa maitiro. Nekuti yega yeaya masheya indices akasiyana kubva kune imwe. Usakanganwe kubva panguva ino zvichienda mberi.
Imwe yemapoinzi evatengesi ndeyekuti mashandiro avo anowanzo kuve nekuchengetedzwa kunoumba Ibex 35. Hazvishamise kuti kuita uku kuri kuita kuti varasikirwe nevazhinji mabhizimusi mikana makore ose. Nekuti pane zvakanakira zvirevo izvo zvinotodzikamisa pamusoro pe50%. Haasi kesi dzakajairika, asi gore rega rega kune zvinoshamisa zvehunhu uhu. Hazvishamisi kuti iwo mubvunzo wemasheya indices ayo anopa kusagadzikana kukuru kune iyo koteteni yemitengo yemigove. Icho chinowanzo dhinomineta mumitengo inosanganisirwa mune aya mareferenzi sosi yeSpanish equities.
1 Latibex, indekisi inotaura chiSpanish
2 Mamwe maIndices: Ibex Medium Cap
3 Imwe nzira Stock Market
4 Ndeipi indekisi yandinofanira kuisa mari?
5 Chii chaunofanira kukoshesa musarudzo?
Latibex, indekisi inotaura chiSpanish
Pakati pese indexes pane imwe yadzo inomira pamusoro pevamwe vese. Haisi imwe kunze kweLatibex uye inoreva Latin American indekisi yehurumende yenyika. Argentine, Chilean, Brazilian uyezve makambani eSpanish akabatanidzwa mairi. Mavambo avo aripo pakuti vese vakanyorwa pamisika yemari yeMadrid. Iwo mutsauko usinga nzwisisike kubva kune uyu musika wakasarudzika. Kune rimwe divi, inofungisisa denderedzwa rakapfupikiswa pane nezve rondedzero inosarudzika yemusika weSpanish. Kusvikira pakuvhura maawa matatu gare gare, na11 mangwanani.
Mune imwe tsinga, paLatibex zvese zvekuchengetedzeka zvakanyorwa mumayuro kwete mune yavo yemari mari. Izvi zvinobatsira kuita mashandiro nekuti haufanire kuita hapana mari yekutsinhana izvo zvinogona kukubhadhara iwe yekuwedzera mari mune yega yega mashandiro anoitwa mumusika uyu wezvemari usinganyatso kuzivikanwa nevazhinji vanoita mari. Chero zvazvingaitika, ndeimwe yedzimwe nzira dzaunadzo parizvino mukutarisana neIbex 35. Isinga zivikanwe kana kushanyirwa, asi inogona kukuita kuti uwane maeuro akawanda kubva panguva dzino chaidzo.
Mamwe maIndices: Ibex Medium Cap
Ino nguva ndiyo indekisi yemitengo ye yepakati-chivharo. Ivo vanozivikanwa nekuve munzvimbo yepakati nepakati maererano neyakaunganidzwa vhoriyamu. Pamusoro pezvo, kumwe kuchengetedzwa kwayo vakwikwidzi vakakomba kujoina kirabhu inosarudzika yeIbex 35. Kune rimwe divi, ibhuku renongedzo rinogadzira goho repagore rezvibodzwa padhuze ne3%. Kunge zvimwe zvinokurudzira kuitira kuti vakwanise kupinzwa basa kubva zvino zvichienda mberi. Hazvishamise kuti pane hutsika hunozivikanwa nevashambadzi vadiki nepakati. NH Hoteles uye OHL muenzaniso wakanaka wezano iri.
Iyo yepakati-chivharo indekisi, kune rumwe rutivi, yakanyorova kwazvo. Ndokunge, hauzove nedambudziko kune kuvhura kana kuvhara nzvimbo mune vamwe vevamiriri vayo. Neshanduko yakafanana neiyo inoratidzwa neinosarudzika indekisi yemari yenyika. Kwete pasina, ivo vavhoterwa kuti vabatanidzwe mumatanho emusika wemasheya. Kuenderana nechimwe chikumbiro chaunogona kusarudza usingaende wakananga kuburikidza neIbex 35. Uye mune dzakawanda zviitiko, zvakare isingazivikanwe nevazhinji vashandisi. Asi zvinogona kukubatsira kuita mari inobatsira munzira inoshanda uye pasina chero mhando yenjodzi inoenderana nemisika yechipiri yemari.
Imwe yesarudzo dzekupedzisira dzauinadzo kunze kweIbex 35 uyu musika wekuenzana wemari. Chokwadi, iyo Alternative Stock Market (MAB) inonyanya kuzivikanwa inyaya yekuti iwo musika wechipiri wezvemari. Izvo dzimwe nguva zvinotongwa nehurongwa hunozivikanwa sekugadzirisa. Ndokunge, kwete nezvinoenderera mberi makotesheni. Kana zvisiri, pane kudaro, pane chete shanduko mumitengo mashoma pazuva. Iyi sarudzo ine njodzi yakakura kupfuura yakapfuura nekuda kwekushaikwa kwemari dzekuchengetedzeka idzi. Hazvishamise kuti hazvishamise kuti iwe une mamwe matambudziko ekupinda kana kusiya kwavo nzvimbo. Zvirinani pasi peicho chaicho chaunoda.
Makambani anoumba iyo Alternative Stock Market haanyatso kuzivikanwa. Uye zvakare, mazhinji acho ane matambudziko akakomba emari anoita kuti vave nenjodzi yekuzadzisa zvinangwa zvavo. Kusvika padanho rekuti pane dzimwe nguva ivo vakapunzika nekuda kwe accounting kana mamiriro emari. Naizvozvo iboka remakambani ari kugashira zviitiko zvekufungidzira mumusika. Nekuti navo unogona kuwana mari yakawanda mumaawa mashoma. Asi nekuda kwezvikonzero zvakafanana, siya iwe maeuro akawanda pane zvaunoda munzira.
Ndeipi indekisi yandinofanira kuisa mari?
Nechokwadi chese kuti pane imwe nguva kana imwe iwe wakazvibvunza iwe uyu mubvunzo. Izvo kune rimwe divi zvine mhinduro yakaoma nekuti zvinoenderana zvakanyanya neprofile iwe yaunounza semudyari mudiki nepakati. Kune rimwe divi, iwe haugone kukanganwa kuti sezvo iwo ari akawanda asingazivikanwe tsika, ivo vachada rakakura basa pane iwe chikamu. Izvi zvinorevei? Asi chimwe chinhu chiri nyore senge iwe unofanirwa kuzvizivisa iwe nezve chinzvimbo chemakambani aya uye kunyanya a nzwisisika kuongorora yekushanduka kwemitengo yavo. Iko kusagadzikana kunowanzo kuve kuripo mumitambo yavo. Nemashambadziro akasarudzika anogona kutungamira kumamiriro ezvinhu asingafadzi zvachose.
Chero zvazvingaitika, zvinogara zvichikurudzirwa kuti usarudze indices dzemvura uye mupfungwa iyi iyo Ibex Medium Cap ndiyo iyo inopa zvivimbiso zvakawanda. Pakati pezvimwe zvikonzero, nekuti ndiyo yakanyanya kufanana neinosarudzika indekisi yeSpanish equities, iyo Ibex 35. Hauzove nemisiyano yakanyanyisa uye zvakare inowanzo gadzira mikana chaiyo yebhizimusi gore rega rega izvo zvinogona kuendesa kuaccount yeakaunti yako yazvino inomuka zvinoonekwa. Kunyangwe nesarudzo yekuchaja gohwo rezvikamu, chinhu chisipo mune mamwe masheya indekisi. Kupfuura dzimwe nzira dzehunyanzvi.
Chii chaunofanira kukoshesa musarudzo?
Panguva iyo iwe paunenge uchizotora yako sarudzo yekuti ndeipi yemasheya indices yakanakira yako zvido zvako, hauzove nesarudzo asi kuongorora mibvunzo inotevera yatinokufumura pazasi. Vachave vanobatsira zvikuru uye kune rimwe divi ivo vachapa hukuru kuchengetedzeka kune mashandiro anoitwa kubva zvino zvichienda mberi
El munhu kuti iwe uchazogovera kune yega yega mashandiro nekuti zvinoenderana neshanduko iyi pachave nemaindices ayo angave akanakira kudzivirira zvaunofarira.
El mari yekudyara chichava chimwe chinhu chekutarisa nekuti mune mashoma emvura indices iwe haugone kuve neyakawandisa kwenguva refu yekugara.
Hazvizove zvakafanana kana chinangwa chako chiri chekuwana kukurumidza kuwana mari kuti kana, pane kudaro, kufarira kwako kuri kugadzira saga yekuchengetedza kwemakore akati wandei. Iwo anozove marongero akasiyana anozoda zvikamu zvakasiyana zvemusika wekutengesa.
Iwe unofanirwa zvakare kuongorora kana iwe uine mari yakasimba mune yako yekutarisa account nekuti mune ino kesi unogona kuisa njodzi yakawanda mukuita. Uye saka iwe unogona kusarudza iyo Imwe nzira Stock Market kana Ibex kapu diki.
Kana pakupedzisira wafunga kuisa mari yako muIbex Small Cap haukwanise kukanganwa chero nguva yaungagone batwa munzvimbo dzakashama. Izvi zvinorevei? Zvakanaka, chimwe chinhu chakareruka sekunge iwo mutengo wemasheya uri kure kwazvo nekutenga. Nenjodzi yekuve usina simba kwenguva refu.
Muzviitiko zvese, haufanire kubhadhara mari yakawanda kune iyo commissions kana mari mukutarisira kwayo. Kana zvisiri, nekusiyana, vane mwero wakaenzana newaIbex 35. Simply no more and no less.
Uye pakupedzisira, panogona kunge paine misiyano inoonekwa kwazvo pakati peimwe kana imwe index index. Kufanana panguva ino, Latibex ndomumwe wevashoma vekunze vari kufamba mundima yakanaka.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Bolsa » Ese ma indices emusika weSpanish wemusika